रक्सी पिउनुहुन्छ ? यी रोगको जोखिममा पर्नुहोला - Samatal Online
रक्सी पिउनुहुन्छ ? यी रोगको जोखिममा पर्नुहोला
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार Santa Kumar Shrestha0Comments
अत्याधिक जाड रक्सी खाने बानिले मानिस पूर्णतया रक्सिको अधिनमा हुन्छ । अत्याधिक मदिराको आदतलाई तत्काल छोड्दा पनि मानिसमा त्यसको प्रभाव लामो समय रहन्छ। रक्सीले बिचार, निन्द्रा , भावाना सामाजिक ब्यवहार , यौन सबैमा असर पर्छ ।
मदिराको प्रयोगले मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र होइ उसको परिवार, उ बसेको समाजलाई पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्छ । यतिमात्र होइन अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने मानिसमा विभिन्न किसिमका रोगको जोखिम हुन्छ ।
रक्सी सेवन गर्दा लाग्ने रोग
–कलेजोमा असर पु¥याउछ,
–जन्डिस हुने सम्भावन उच्च रहन्छ,
–पेट दुख्ने , पेट्भित्र अल्सर हुने समस्या हुन्छ,
– रगत को कमी हुन्छ,
–शरिर सुन्निने समस्या हुन्छ,
–हातखुट्टा झमझमाऊने समस्या हुने,
–लोग्ने मानिसमा नपुन्सक्त्ता हुने सम्भावना हुन्छ,
–बिहान बिउझदा हात वा पुरै शरिर काम्ने समस्या हुन्छ,
–धेरै मदिरा सेवन गर्ने मानिसमा तनाव बढी हुन्छ,
–धेरै रक्सी सेवन गर्दा स्मरण शक्ती कमजोर हुन्छ,
–परिवार र समाजमा झगडा तथा वेमेलको अवस्था आउँछ ।
यस्ता विभिन्न समस्याको कारण निम्त्यानु भन्दा मदिरा सेवन नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले मदिरा सेवन गर्ने बानी त्याग्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यदी आफैले चाहदा चाहदै पनि मदिरा सेवन गर्ने बानी नहटेमा चिकित्सकको परामर्शमा मदिराको तल हटाउन सकिन्छ ।